China ukukhanya brown brown T101 / brown T108 / brown T103 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Ukukhanya brown T101 / Brown T108 / Brown T103
Ukukhanya Pvb Brown
I-Baizan PVB interlayer yinto ye-macromolecule ebunjiweyo yi-polyviny, i-resyral resin eyenziwe ngeplastikhi kwaye ikhutshiwe yiplastikhi. Ifilimu yethu ye-PVB enokukhanya okuqaqambileyo, ubushushu kunye nokumelana nokubanda, ukutyeba, kunamathela kwiglasi engaphiliyo kunye nokwenza iglasi yokhuseleko elaminethiweyo. Ukucaciswa kokuqina kobungakanani kuphakathi kwe0.2 mm - 2 mm.
I-Baizan PVB interlayer isetyenziselwa ukwenza iglasi yokhuseleko elaminethiweyo. Iglasi elaminethiweyo liglasi ekhethekileyo efakwe nefilimu ye-PVB phakathi kwamanqanaba amabini eglasi eqhelekileyo, ephantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo, ebopha ukwenza ulwakhiwo olunye. Ngenxa iglasi PVB elaminethiweyo kunye nokhuseleko, ukulondolozwa ubushushu, ubungqina ingxolo, kunye nokumelana yelanga, njl
Egqithileyo Cacisa i-pvb
Okulandelayo: ukukhanya okuluhlaza GN101 / Vridis GN108
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka i-B113 / i-Opaque eluhlaza okwesibhakabhaka i-B102 / i-Ford ...